Ny Cruise Line norveziana dia miara-miasa amin'ny Alibaba Group hiditra amin'ny tsenan-dranomasina sambo China
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Ny Cruise Line norveziana dia miara-miasa amin'ny Alibaba Group hiditra amin'ny tsenan-dranomasina sambo China
Vaovao Mafana China • Cruising • fampiasam-bola • People • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Enga anie 4, 2017
Ny Norveziana Cruise Line Holdings Ltd dia nanambara ny fanombohana fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ny Alibaba Group, orinasa lehibe indrindra amin'ny varotra an-tserasera sy finday lehibe indrindra.
Ireo orinasa roa ireo dia hitrandraka ny fahaizan'ny Norveziana amin'ny fanomezana traikefa fialan-tsasatra miavaka sy ny fanomezana fitsangantsanganana an-tsambo vaovao sy nahazo loka miaraka amin'ny fahitana tsy manam-paharoa Alibaba momba ny filàna sy ny filan'ny mpanjifa sinoa mba hanaterana ny vokatra namboarina indrindra ho an'ny tsenan'ny sambo fitsangatsanganana ho an'ny tsenan'i Shina eo an-toerana. Ampiasaina ny ekosistra manitatra an'i Alibaba hisarihana ny mpanjifa, ireo orinasa roa ireo dia hijery hampitombo bebe kokoa ny fahatsiarovan-tena any Shina momba ireo tolotra miavaka amin'ny fialantsasatra fitsangantsanganana. Nikasa ny hanao azy io ho safidy fialan-tsasatra ankafizin'ny mpizahatany sinoa izy amin'ny vinavina ho tonga tsena loharano faharoa lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana. Ireo orinasa ireo dia hiara-hiasa amin'ny mpanjifa Alibaba ihany koa amin'ny traikefa vaovao sy tsy manam-paharoa amin'ny Internet-to-offline (O2O) an-dranomasina manerana ny sambo Norveziana monina any Shina sy manerantany.
Tonga izany fanambarana izany rehefa miomana hiditra amin'ny tsena fitsangantsanganana sinoa ny norveziana amin'ny volana jona 2017 miaraka amin'ny fampidirana ny sambo manavao azy indrindra - ny mpandeha 3,850 norveziana Joy - ilay sambo fitsangantsanganana voalohany noforonina sy namboarina manokana ho an'ireo mpivahiny sinoa. I Norvezy Joy no ho sambo faha-25 amin'ny sambo Norvezy miampita ireo marika telo ao aminy: Norvezy Cruise Line, Oceania Cruises ary Regent Seven Seas Cruises.
"Faly izahay miara-miasa amin'ny Cruise Line norveziana tamin'ity fandraisana andraikitra lehibe ity," hoy i Michael Evans, filohan'ny vondrona Alibaba. “Ny fifandraisanay nivelatra dia ohatra iray hafa amin'ny fomba anampian'ny Alibaba ny marika iraisam-pirenena hahatratra ny mpanjifa sinoa amin'ny alàlan'ny angon-drakitra, marketing ary teknolojia matanjaka. Manantena ny fanamafisana bebe kokoa ny fiaraha-miasa aminay norvezianina izahay amin'ny ho avy. ”
Alibaba no miasa amin'ny tsenan'ny Internet sy finday lehibe indrindra eto an-tany. Alibaba dia mihoatra ny orinasa e-commerce, manolotra vokatra sy serivisy maro isan-karazany ho an'ireo mpampiasa mavitrika efa ho antsasaky ny miliara isam-bolana. Any Shina, miaina, miasa ary milalao amin'ny Alibaba ny olona, ​​mividy vokatra eto an-toerana sy any ivelany, ary mankafy ny serivisy amin'ny fialamboly sy fomba fiaina - fitsangatsanganana, fanaterana sakafo ary tambajotra sosialy.
"Hatramin'ny nandefasana ny fitsangantsanganana voalohany anay 50 taona lasa izay, ny norveziana dia nanjary lasa iray amin'ireo anarana mitahiry be indrindra amin'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko miaraka amin'ireo fanavaozana mamaky tany izay namolavola ny indostrian'ny fitsangantsanganana maoderina", hoy i Frank Del Rio, filoha sady tale jeneralin'ny Cruise Norvezianina. Line Holdings. “Ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Alibaba dia hanambatra ny tantaran'ny fanavaozana ny norveziana amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo sy ny fidirantsika amin'ny tsena fitsangantsanganana sinoa miaraka amin'i Joy Joy miaraka amin'ny fahalalàn'i Alibaba ny tobin'ny mpanjifa ao Shina sy ny tontolo iainany miavaka izay mahatratra hatrany hatrany ny mpanjifa amin'ny fomba vaovao sy tsy mitsaha-mitombo. ”
"Ny fiaraha-miasa amin'ny Alibaba dia mameno ny fifandraisanay mafy sy efa misy miaraka amin'ireo masoivohon'ny dia tsy mivadika mba hanomezana fahitana tsy manam-paharoa momba izay tadiavin'ny mpitsangatsangana sinoa amin'ny traikefa vakansy," hoy i David Herrera, filoham-pirenena NCLH China. "Ny fitambaran'ny fahaizan'ny norvezianina amin'ny famoahana traikefa fialan-tsasatra tsy hay hadinoina, ny fahitan'i Alibaba ny fihetsiky ny mpanjifa sinoa ary ny fahalalan'ireo masoivohon'ny mpitsangatsangana ny safidin'ny mpitsangatsangana sinoa dia hamorona vokatra fitsangantsanganana tsy hitoviana any Sina.
Norveziana dia nandefa ny fifaliana norveziana tamin'ny 27 aprily, ary taorian'izay dia natombok'ilay sambo ny fametrahana azy indray avy eo amin'ny toeran'ny sambo any Alemana mankany amin'ny seranan-tsambony any Shanghai. Ny lanonam-pireneny voalohany sy fanaovana batemy dia hatao ny 27 jona any Shanghai, izay ahitana ny Godfather an-tsambo, 'King of Pop Pop', Wang Leehom.
Rahona misy poizina any Alemana taorian'ny fipoahan'ny simika
Nanampy fiaramanidina Airbus sy Boeing 36 an'ny Delta Air Lines ...
Ny Wizz Air Capacity Ramp-Up dia mety hitondra voankazo